Ny lalao Geeks Board marina dia efa manao lalao amin'ny vola laniny manokana
Andao hiverina amin'ny volana aprily 2020. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka tany ivelany ny valan'aretina, ary voafandrika tao an-trano ny olona ary tsy nisy azo natao. Ary tsy milamina ireo mpilalao latabatra. Araka ny fantatsika rehetra, ireo mpilalao latabatra dia tifitra lehibe izay manao ny sarin-dalao, boaty fitehirizana ary latabatra lalao natokana mihitsy aza. Ary ...
Ny ray manan-janaka dia mbola afaka mamoaka "tontolon'ny lalao board"
Efa nahita dadanao mikarakara zaza ve ianao? Ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny ray dia mikarakara ny zanany = "tsy tompon'andraikitra". Saingy any Huddersfield, UK, misy raim-pianakaviana toy izany, eo am-pikarakarana ny zanany tsy dia tsara loatra, ary teny an-dalana, dia namolavola tabilao g ...
Ny lalao, izay mivarotra seta 17 isa-minitra dia nahatratra 50 tamin'ity taona ity
Tamin'ny taona 1971, tao amin'ny tanàna kelin'i Cincinnati, Ohio, dia nisy mponina italiana maro. Anisan'izany ny fianakavian'i Robbins. Tian'izy ireo ny milalao lalao karatra antsoina hoe Crazy Eight, saingy matetika izy ireo no miady hevitra momba ny fitsipika miova. Noho izany, namerina namorona ny lalàna izy ireo ary nantsoina hoe UNO. Rehefa manana ny karatra farany ianao, ...
Mora kokoa ny milaza fa tsy vita! Ahoana ny fomba hisorohana ny "loza voajanahary" amin'ny firakotra lalao
Raha jerena ny laharan'ny lalao kilalao eny amin'ny talantalana lalao, tadidinao ve ilay lalao izay ny firakofany dia mety amin'ny fahitana voalohany? Na ny lalao mahafinaritra ny mekanisma, nefa toa mampatahotra kely. Amin'ny lafiny sasany, ny fonon'ny lalao dia mamaritra raha tsara ny lalao na tsia. Miaraka amin'ny fanatsarana ny olona ...
Fampiroboroboana ho an'ny vondrona tovovavy amin'ny famolavolana lalao amin'ny Board Koreana
Ny indostrian'ny sampy dia matotra ampy any Korea Atsimo. Araka ny voalaza, Korea dia manana harena telo: sampy, fiantsenana, sakafo. Ny sampy tsara tarehy dia mitovy, fa tena vitsy ny sampy mahaliana. Vao tsy ela akory izay, tao amin'ny indostrian'ny famolavolana sary an'ny tanora any Korea atsimo, ...
Ny mpanamboatra Kylin dia mpanamboatra lalao any amin'ny birao izay manaiky ny ambongadiny sy ny fanaingoana azy
Ny mpanamboatra Kylin dia manana servise tsara indrindra azonay namboarina ho anao, na inona na inona endrika ary manome ny vidin'ny orinasa. Mino izahay fa ny fifandraisana mahomby eo amin'ny mpamokatra sy ny mpanjifa dia miankina amin'ny fahamendrehana sy ny fahitsiana. Ny fanarahana akaiky an'io fitsipika io dia ahafahantsika mihaona tsy tapaka sy mihoatra ny ...
Kylin manufactory dia mpanamboatra lalao matihanina amin'ny birao
Kylin pabrikina dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana lalao kilalao, lalao karatra, karatra filalaovana, singa lalao, afisy velvet, boaty fonosana ary kojakoja. Manamboatra orinasa famokarana efatra izahay; fanontana, hazo, vola madinika & plastika. Miara-miasa amin'ny faritra maherin'ny 10 izahay ...
Ny fahitana ny orinasa mpanamboatra lalao
Kylin pabrikina dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana lalao kilalao. Ny vinanay dia: 1. Miara-miasa amin'ny mpanjifa manerantany ary manome fahatokisana, serivisy fanaovana ny marina ho azy ireo, izay orinasa miavaka eo amin'ny sehatry ny lalao lalao. 2. Manokana ny tenantsika amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny famokarana ...
Sleeves amin'ny karatra, Playmat vita pirinty manokana, Lalao board mats board, Karatra fanamafisana amin'ny mpihazona hazo, Dice manokana, Karatra filalaovana manokana,